Kooxda Horseed oo galabta guul muhiim ah ka gaartay naadiga Muqdisho City Club – Gool FM
Kooxda Horseed oo galabta guul muhiim ah ka gaartay naadiga Muqdisho City Club
(Soomaaliya) 26 Feb 2019. Kooxda Horseed ayaa galabta guul muhiim ah ka gaartay naadiga Muqdisho City Club kadib markii ay ugu adkaatay 2-1, ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Somali Premier League.
Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan labada kooxod waxey soo bandhigeyn ciyaar heer sara ah balse qeybtii hore kulanka ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku horkaceyso kooxda Horseed, waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahan Cadaani, sidaas ayaa lagu kala nastay qeybtii hore dheesha.
Markii dib la isku soo laabtay qeybtii dambi ee ciyaarta Kooxda Horseed ayaa la timid goolkii 2-aad ee ciyaarta waxaana u dhaliyay ciyaaryahankii hore kooxda Dekedda Cabdulaahi Cali Bile, kulan ayuu ka dhigay 2-0 ay hogaanka ku heesa Horseed.
Balse ciyaarto dhamaad ah wiilasha Muqdisho City waxey la yimaadeyn goolkii calanka wallow ay iska lumiyen fursado badan oo goolal loo filan karay, waxaana goolka u dhaliyay Marcelo.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Horseed.
Liverpool oo ka cabsi qabta in Roberto Fermino uu seegi doono kulanka culus ee….